पीसी को लागी Wordscapes डाउनलोड गर्नुहोस् [विन्डोज 10, 8,7र म्याक]
मार्च 14, 2021 द्वारा फेसटाइम गाइड एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
1 पीसी विन्डोज xp / 7/8 / 8.1 / 10 को लागी Wordscapes डाउनलोड गर्नुहोस् (32 बिट - 64 बिट) सित्तैमा
1.1 वर्डस्केपहरू पीसी विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्नुहोस्7/विन्डोज / / विन्डोज 10 सित्तैमा
1.2 पीसी विन्डोजको लागि वर्डस्केप अनुप्रयोगका सुविधाहरू
2 कसरी पीसी विन्डोजमा वर्डस्केपहरू डाउनलोड र स्थापना गर्ने 10/8.1/8/7 र म्याक?
3 पीसीको लागि वर्डस्केपहरू कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्ने (विन्डोज 10/8/7 & म्याक)? भिडियो ट्यूटोरियल
पीसी विन्डोज xp / 7/8 / 8.1 / 10 को लागी Wordscapes डाउनलोड गर्नुहोस् (32 बिट - 64 बिट) सित्तैमा
नमस्कार साथीहरु!! यदि तपाइँसँग कसरी प्रयोग गर्ने बारे कुनै बिचार छैन वर्डस्केपहरू तपाईंको पीसी विन्डोजमा 10/8/8.1/7, यदि हो भने यो तपाइँको लागि लेख हो.
यस लेखमा, तपाईं कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पीसीको लागि वर्डस्केपहरू, ल्यापटप, र डेस्कटप को लागी सित्तैमा.
चरण विधि चरण, मैले डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि व्याख्या गरेको छु पीसी विन्डोजको लागि वर्डस्केपहरू 7, विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, र विन्डोज 10 (32 बिट - 64 बिट).
अब, Please go through this article and get all the details you need to know about how to Download Wordscapes For PC (विन्डोज 10, 8,7र म्याक) यसलाई जाँच गरौं…
वर्डस्केप डाउनलोड पीसी विन्डोज को लागी7/विन्डोज / / विन्डोज 10 सित्तैमा
पील्डफन द्वारा विकसित वर्डस्केप खेल. वर्डस्केप खेलले तपाइँको गेमप्लेमा शब्द खोजी र क्रसवर्डहरूको सही संयोजन छनौट गर्न सक्षम गर्दछ.
Challenge yourself and improve your thinking ability with Wordscapes for Windows and Mac or Wordscapes for Mobile (एन्ड्रोइड र आईओएस).
वर्डस्केप खेलको रोमाञ्चक पक्ष भनेको यो हो कि तपाईंलाई कुनै पनि समय सीमा प्रदान गरिएको छैन, enabling you to solve whatever word puzzle you’re in at your comfortable time.
यसले तपाईंलाई संकेतहरू दिन्छ यदि तपाईंले आफूलाई कडा शब्दहरूमा समेट्नु भयो जुन तपाईं बुझ्नुहुन्न र समाधान गर्न सक्नुहुन्न.
सर्वश्रेष्ठ Android Emulators Bluestacks & Nox अनुप्रयोग प्लेयर
अपरेटिंग सिस्टमहरू विन्डोज 7,8/10 वा म्याक
अनुप्रयोग विकासकर्ता PeopleFun
अनुप्रयोग अद्यावधिक गरियो सेप्टेम्बर 04, 2019
APK संस्करण 1.1.8
एमुलेटरका लागि एन्ड्रोइड संस्करण आवश्यक छ एन्ड्रोइड 4.1, 4.1.1
APK फाईल आकार 82.8 MB
पीसी विन्डोजको लागि वर्डस्केप अनुप्रयोगका सुविधाहरू
Wordscapes सरल & द्रुत डाउनलोड!
वर्डस्केप पछिल्लो संस्करण!
2000 दोहोरिन बिना प्लस स्तरहरू
कुनै पनि स्तरमा तपाईंको गति समायोजित गर्नुहोस्
सुरु सजिलो तर छिटो समाप्त हुन्छ
कसरी पीसी विन्डोजमा वर्डस्केपहरू डाउनलोड र स्थापना गर्ने 10/8.1/8/7 र म्याक?
अहिलेको रूपमा, विन्डोज पीसीको लागि कुनै आधिकारिक अनुप्रयोग वा वर्डस्केपको सफ्टवेयर विकसित गरिएको छैन. विन्डोज कम्प्युटरमा वर्डस्केप स्थापना गर्ने एक मात्र तरिका एन्ड्रोइड इमुलेटर प्रयोग गरेर हो. सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक, भरपर्दो, सुविधा सम्पन्न, र राम्रोसँग अनुकूलित एन्ड्रोइड इमुलेटर ब्लुएस्टेक्स हो.
Bluestacks प्रयोग गरेर पीसीको लागि Wordscapes डाउनलोड र स्थापना गर्न चरणहरू:
अब तपाईं सिधा ब्लूस्ट्याक्स प्रयोग गरी गुगल प्ले स्टोरबाट वर्डस्केपहरू डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ4अनुप्रयोग.
Wordscapes अनुप्रयोग केहि मिनेट मा स्थापना हुनेछ, र तपाइँ Joox प्लेयर को उपयोग शुरू गर्न सक्नुहुन्छ.
Nox अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीको लागि Wordscapes डाउनलोड र स्थापना गर्न चरणहरू :
अब वर्डस्केप अनुप्रयोगको लागि खोजी गर्नुहोस्.
तपाईंको Nox इमुलेटरमा वर्डस्केप अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्
स्थापना पूरा भएपछि, तपाईं आफ्नो पीसीमा वर्डस्केप अनुप्रयोग चलाउन सक्नुहुनेछ.
पीसीको लागि वर्डस्केपहरू कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्ने (विन्डोज 10/8/7 & म्याक)? भिडियो ट्यूटोरियल
यो लेख पढ्न को लागी धन्यवाद, म आशा गर्छु कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो र तपाईंलाई पक्कै मद्दत गर्नेछ विन्डोज र म्याकको लागि वर्डस्केप अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्. अझै, यदि तपाइँसँग उही सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया दयालु मा साझा टिप्पणी बाकस. थप, तपाईलाई अझ सामान चाहिन्छ, त्यसो भए मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्. म तपाईलाई सहयोग गर्न सँधै खुशी छु.
प्लस मेसेन्जर पीसी को लागी / म्याक / विन्डोज 7/8/10 / कम्प्युटर
पीसी विन्डोजको लागि एपावरपीडीएफ 10/8/8.1/7 - नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
Photomath for PC / विन्डोज 7/8/10 / Mac – Free Download
Rkill For PC Windows 10/8/7 - नि: शुल्क डाउनलोड पछिल्लो संस्करण
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम सँग ट्याग गरिएको: wordscapes apk for pc, wordscapes for pc free, wordscapes for pc free download, wordscapes for pc online, wordscapes for pc windows 7, wordscapes game for pc free download